Ungawabamba Kanjani Amanzi Enkungwini kanye Nomswakama Esimweni Sezulu Esomile | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ungabamba Kanjani Amanzi Enkungwini kanye Nomswakama Esimweni Sezulu Esomile
Ezweni lapho ugwadule luqhubeka khona ukuthuthuka, ukufunwa kwezixazululo kuyaqhubeka nokushayela izindlela eziningi zokulwa nokuntuleka kwamanzi. Yize kubhulogi sikhulume kaningi ngezixazululo zesomiso, noma inkinga ezihilelayo, kulokhu sizokhuluma ngenkungu. Injani inqubo yokuyibamba nokuyiguqula ibe ngamanzi.
Ngaphambi kokuqala, khumbula ukuthi akuyona uhlelo lwamanzi "lokudala". Empeleni amanzi akhona ayathathwa, ngamaconsi amancane, kepha ayathathwa. Kusho ukuthi Esikhundleni sokudala, le ndlela inenzuzo yokuqondisa kabusha ukusetshenziswa, kokubili ukunisela nokusetshenziswa. Empeleni kuyindlela enhle kakhulu yalezo zikhathi lapho kungaba khona inkungu, kepha kukhona isomiso, ukuchelela akuyeki. Amanzi amancane amakhulu. Sichaza kabanzi ngezansi.
1 Inkungu ibamba. Amaphaneli abamba amanzi
3 Ukugcinwa kwayo? Okuncono. Cishe alikho
Inkungu ibamba. Amaphaneli abamba amanzi
Amapaneli wokubamba inkungu noma izikrini kuhloselwe ukuqoqa umswakama noma inkungu. Inhloso yawo ukufeza ukugxilisa izinhlayiya zamanzi, aze abe manzi ngokwanele, okungukuthi, uwaguqule abe ngamaconsi. Umqondo wazalwa njengesisombululo ezindaweni lapho ukuntuleka kwalolu ketshezi olubaluleke kakhulu kwakuphuthuma khona kakhulu. Futhi ngempela, bangasebenza kunoma iyiphi indawo, ngoba nasogwadule ebusuku kukhona umswakama. Okunye futhi, ukuthi ukuthathwa kukhulu kakhulu, lokho kuzoya ngomswakama noma inkungu yendawo ecacile.
Indlela abasebenza ngayo ilula kakhulu. Njengoba izinhlamvana ezincane zamanzi zihlala esikrinini, ziyagxila zenze amaconsi amakhulu. Lawa amathonsi, ngesisindo sawo ekugcineni athanda ukuwa ngamandla adonsela phansi. Ngezansi kukhona umqokeleli wale manzi awayo, aqondiswe endaweni oyifunayo. Kungaba ngqo ezitshalweni, noma iziqukathi ezigcina amanzi.
Ama-Mist Trap Panels enziwe ngocingo olubunjiwe kahle olungagwazwa kuphela ngepipi lepensela. Kunezinhlobo eziningana, kepha ngokwesibonelo, enye eshibhe kunazo zonke ekhona futhi esetshenziswa kakhulu yileso sepulasitiki. Kulaba, isibonelo, ububanzi bezimbobo lapho inkungu noma umswakama "ohamba khona" kukhudlwana ngandlela thize. Kungadala ukulahleka kokugcinwa kwenkungu, kepha akufanele kulahlekelwe ukusetshenziswa kwayo. Imitha ngalinye lesikwele lemeshini liyakwazi ukuthola amalitha amanzi ayi-4 kuye kwayi-15 ubusuku ngabunye!
Umqondo ukuwabeka emithambekeni, noma ezindaweni lapho kugijima khona umoya kakhulu. Babuye bavame ukusuka kumamitha angama-300 kuye kwangama-800 ngaphezu kolwandle. Kepha njengoba sishilo, empeleni zingatholakala cishe noma kuphi.
Isibonelo, kufanele kukhunjulwe, ukuthi inkungu kungenzeka ingabi nobumsulwa obufanayo yonke indawo amanzi angangcoliswa. Ngokuya ngendawo, ingagcinwa ezitsheni uma ukusetshenziswa kwayo kuzokwanda kakhulu emuva kwesikhathi futhi kungafanele kungcoliswe. Futhi, uma amanzi engakulungeli ukusetshenziswa ngisho noma egcinwe, ukuqoqwa kwansuku zonke kungalandelwa ukuhlunga. Noma ngabe kukotini, isihlabathi se-quartz, i-gravel, amalahle, i-chlorination, njll.
Ukugcinwa kwayo? Okuncono. Cishe alikho
Ngenxa yokuthi ukufakwa kwayo kulula kakhulu futhi akudingi amadivayisi amaningi, ukugcinwa kwayo kulula kakhulu. Noma kunjalo, ezinye izinkinga ezincane zingavela, njengokuphuka kwamashubhu. Ngokuya ngendaba, kungakuhle ukuwashintsha, noma angalungiswa ngokufaka uphawu uma kungenamandla kakhulu. Kungagcina kube khona ukudabuka noma izinyembezi ezindwangu. Imvamisa, ingalungiswa ngokushesha ngenaliti nentambo.
Okubi kakhulu esingakuthola kuyizikrini ezinkulu futhi ezikhanyayo ukuthi isivunguvungu noma isiphepho siyabachitha. Uma kunjalo, ukuvimbela kuhlala kungcono kunokwelapha, futhi ngokulindela umoya, kukhipha imali ngesikhathi. Esinye isizathu kungaba amagundane amancane, noma izilwane ezomile eziseduze. Kumele kukhunjulwe ukuthi uma isitsha siveza amanzi amaningi, lezi zinkinga kuzofanele kubhekwane nazo.
Ngokuvamile, ukuqina kwemishini ngokuvamile kuyiminyaka eyi-5. Kuthiwani uma senza izibalo ezimbalwa, ngamunye angasinikeza amathani wamathani amanzi ngesikhathi sokuphila kwakhe. Uhlelo oluhle lokulwa nesomiso, obekufanele ukuthunyelwa kwebhulogi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izinsiza » Ungabamba Kanjani Amanzi Enkungwini kanye Nomswakama Esimweni Sezulu Esomile
IGuadalupe Delgado kusho
Kuyindlela enhle kakhulu yeBajacalifornia neSonora eMexico
Phendula uGuadalupe Delgado
Amafu angaqondakaliyo we-Morning Glory nezimbangela zawo ezingaba khona
Kungenzeka yini ukuthi singena onyakeni ofudumele?